छोराले चलाएको अटो दुर्घटनामा परी आमाको मृत्यु, बुबा र भाइ घाइते – Sandesh Press
छोराले चलाएको अटो दुर्घटनामा परी आमाको मृत्यु, बुबा र भाइ घाइते
November 14, 2021 127
सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ बाङ्गेसिमल नजिक कर्णाली राजमार्गमा छोराले चलाएको अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा आमाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा दुई जना घाइते भएका छन्। घाइते हुने मध्य भाइ र बुवा रहेका छन् । वीरेन्द्रनगरबाट गिरिघाटतर्फ जाँदै गरेको भे १ ह ८४४ नम्बरको अटो अनियन्त्रित
भई सडकको कल्भर्टमा ठो;क्कि;एर दुर्घटना भएको हो।प्रहरीका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यलय सुर्खेतका अनुसार मृत्यु हुनेमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ का ४४ वर्षीया जमरा शाही छन्। घाइतेलाई प्रहरी चौकी बाङेसिमलबाट ख’टिएको प्रहरी टोलीले उद्धार गरी उपचारको लागि कर्णाली केयर अस्पताल सुर्खेतमा पुर्‍‍याइएको थियो।
काठमाडौं । बालबालिकाका लागि सरकारले ४० लाख खोप किन्ने सम्झौता गरेको छ । सरकारले १२ देखि १७ वर्षका बालबालिका तथा किशोर किशोरीका लागि लक्षित गरी मोर्डनाको ४० लाख डोज खोप खरिदका लागि सम्झौता गरेको हो । यो खोप मार्च २०२२ सम्म नेपाल ल्याइने बताइएको छ ।
विश्व बैंकको वित्तिय सहयोगमा कोभ्याक्ससँग लागत साझेदारीमार्फत खरिद गरिने खोपका लागि खोप सम्बन्धित विश्वव्यापी सञ्जाल ‘गाभी’सँग सम्झौता भएको हो ।
विश्व बैंकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ – ‘२०२२ को मार्चदेखि खोप आउनेछ । यसले नेपालका ७२ प्रतिशत जनसंख्या साथै १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई खोप दिने लक्ष्यमा सहयोग गर्नेछ ।’
माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फेरिस ह्याडेड जिर्भसले नेपाल सरकार तथा जनतालाई सहयोग गर्न पाएकोमा गौरवान्वित भएको बताएका छन् ।
विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई महामारीविरूद्धको स्वास्थ्य प्रतिकार्यका लागि १० करोड ४० लाख डलर उपलब्ध गराइसकेको छ । जसमा कोभिड–१९ विरूद्धका खोपहरूको खरिद र विस्तारका लागि छ करोड ७५ लाख डलर विनियोजन गरिएको छ ।
यससँगै नेपाल कोभ्याक्ससँग लागत÷साझेदारी विकल्प उपयोग गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो रहेको छ । ‘यो खोपले १२ बर्ष उमेर माथिका नेपालीलाई खोपको विकल्प विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भने ।
नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यो सहयोग समग्र कोभिड प्रतिकार्यको एक मुख्य अंश भएको बताए ।
Prevआमाले सहकारीबाट लिएको ऋण उठाउन जान्थे यी युवक जब छोरी नै मन परेपछि भयो यस्तो घटना
Nextयी नै हुन् ! बिहानै बसको ठ’क्करबाट ज्यान गुमाएकी २२ वर्षीया यु’वती
नायिका पूजा शर्माकाे विवाह छिटै हुने सम्भावना
मलेसियामा न्युनतम तलब १५००: तर नेपाली कामदारले पाउदैनन् सरकारले तोकेको तलब, किन..?
यी ३ राशिको कहिल्यै टिक्दैन प्रेम सम्बन्ध, हद भन्दा बढी गर्दछन् टिप्पणी